Roborock wuxuu dib ugu soo nooleeyay warshadaha CES 2022 | Warka gadget
Roborock wuxuu dib ugu soo nooleeyay warshadaha CES 2022
Miguel Hernández | 10/01/2022 17:39 | Dhacdooyinka, General
Roborock, oo ah shirkadda ku takhasustay horumarinta iyo soo saarista qalabka nadiifiyaha ee robot-ka iyo wireless-ka labadaba, ayaa maanta lagu soo bandhigay Bandhigga Elektrooniga ee Macaamiisha 2022 (CES) calankeeda cusub, Roborock S7 MaxV Ultra. Iyada oo leh qalab cusub oo ku dallacaadda smart, S7 MaxV Ultra waxaa ku shaqeeya tignoolajiyada ugu horumarsan ee Roborock ilaa maanta si heer sare ah iyo xitaa nadiifin ku habboon.
Mid ka mid ah dallad dallad ah oo wada sameeya: Waafaqsanaanta Roborock Dump-ka cusub, Biyo-baxa iyo Buuxinta Saldhigga, waxay yaraynaysaa dayactirka gacanta ee isticmaalayaasha. Xarigga ayaa si otomaatig ah u xoqaya inta lagu jiro iyo ka dib fadhiyada nadiifinta, hubinta in S7 MaxV Ultra uu diyaar u yahay socodsiintaada xigta. Saldhigga dallacadu sidoo kale wuu is-nadiifiyaa marka aad dhaqayso xaaqin, iyada oo saldhigga ku ilaalinaysa xaalad wanaagsan. Intaa waxaa dheer, shaqada buuxinta haanta biyaha ee tooska ah waxay u oggolaaneysaa S7 MaxV Ultra inuu faarujiyo oo xoqo ilaa 300m2, 50% in ka badan kuwii ka horreeyay, halka bacda boodhka ay hayso wasakh ilaa 7 toddobaad.
Nidaamka ka fogaanshaha caqabadaha cusub ee ReactiveAI 2.0: Ku qalabaysan isku-darka kamarada RGB, iftiinka 3D habaysan, iyo qayb cusub oo neerfaha ah, S7 MaxV Ultra waxay u aqoonsanaysaa walxaha jidkeeda si sax ah oo degdeg ah ula qabsanaya inay nadiifiyaan hareerahooda, iyadoon loo eegin xaaladaha iftiinka. Intaa waxaa dheer, waxay aqoonsanaysaa oo ay ka helaysaa alaabta guriga ee abka, taasoo kuu oggolaanaysa inaad si degdeg ah u bilawdo nadiif ah agagaarka miisaska cuntada ama fadhiga fadhiga adigoo si fudud u taabanaya astaanta abka. Waxay xitaa aqoonsataa qolalka iyo alaabta sagxadda, waxayna ku talisaa hababka nadiifinta ugu habboon sida isku xigxiga, awoodda nuugista, iyo xoojinta xoqidda. S7 MaxV Ultra waxaa shahaado ka siisay TUV Rheinland heerarkeeda amniga internetka.
Iyada oo la aqoonsan yahay tignoolajiyada VibraRise: Loogu talagalay fadhiyada nadiifinta ee aan joogsiga lahayn, S7 MaxV Ultra waxa uu leeyahay Roborock's teknooloojiyada VibraRise® ee la mahadiyay - isku darka xoqitaanka sonic iyo suufka iskiis kor u qaadaya. Nadiifinta Sonic waxay ku xoqdaa dhulka si xoog leh si looga saaro wasakhda; halka xaaqiddu ay awood u leedahay in ay si habsami leh ugu gudubto meelaha iska soo horjeeda, tusaale ahaan, waxay si toos ah u kor u qaadaysaa iyadoo ay jiraan roogagyo.
Marka lagu daro awoodda nuugista ugu badan ee 5100pa, S7 MaxV Ultra waxay bixisaa nadiifin aad u wanaagsan. S7 MaxV Ultra (S7 MaxV robot vacuum cleaner pack iyo faaruqinta, dhaqida iyo buuxinta saldhiga), ayaa laga heli doonaa Spain qiimo dhan 1399 euro, rubuci labaad ee 2022. S7 MaxV robot vacuum cleaner sidoo kale si gaar ah ayaa loo iibsan karaa qiimaheedu waa €799.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Roborock wuxuu dib ugu soo nooleeyay warshadaha CES 2022
HyperX waxay ku soo bandhigaysaa CES 2022 sameecado iyo qalab ku wareegsan